Olona 30 tapitrisa ao Brezila no miaina any amin’ny “dezaka fampitam-baovao” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Marsa 2019 5:18 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, English, русский, Português
Breziliana eo amin'ny 30 tapitrisa eo no tsy mahita gazety eo an-toerana / Sary: Magno Borges/Agência Mural
(Amin'ny teny Portiogey avokoa ny rohy rehetra)
Navoaka ity lahatsoratra ity noho ny fiarahamiasa eo amin'ny Global Voices sy ny Agênce Mural. Nosoratan'i Lucas Landin, Micaela Santos sy Paulo Talarico ny lahatsoratra.
Ny 1 Désambra, nisy ny oram-baratra namely vao maraimbe, ka naha-tondra-drano faritra maromaro tao Franco da Rocha, avaratry ny faritra metropolitanina ao São Paulo. Tapaka ihany koa ny lalana, mihidy ny mpivarotra ary tsy maintsy nandeha lalan-kafa ireo fiara fitateram-bahoaka rehefa mivezivezy ao an-tanàn-dehibe
“Sarotra ny mamantatra ny toetry ny tambajotran'ny fitateram-bahoaka rehefa tondra-drano ny tanàn-dehibe”, hoy i Amanda Ferreira, mpianatra 20 taona. «Ny hany fomba hahazoana vaovao dia ny manontany amin'ireo olona tafahitsoka tamin'ny tondra-drano sy ireo mody any amin'izy ireo».
Tsotra ny fanazavana momba ny fahasarotan'ny fahazoam-baovao. Tsy manana afa-tsy fitaovam-pifandraisana roa i Franco da Rocha ary voasoratra anarana ho «efa dezaka amin'ny fampitam-baovao», araka ny tatitra farany navoakan'ny Atlas de l’Information, manombana ny isan'ny fampitam-baovao misy ao amin'ireo tanàn-dehibe Breziliana nanomboka ny taona 2017.
Tamin'ity taona ity, ankoatra ny zava-misy hoe Breziliana 30 tapitrisa no tsy afaka miditra amin'ny gazety ao an-toerana, nifantoka tamin'ireo tanàn-dehibe zara raha mivoaka amin'ny fampitambaovao ny fikarohana notontosain'ny Projor (Ivo-toerana ho Fampandrosoana ny Asa Fanaovan-gazety) : ireo «any amin'ny dezaka amin'ny fampitam-baovao ».
«Hitako ny zava-mitranga ao Franco da Rocha ao amin'ny tambajotra sosialy ary, indraindray, ao amin'ny Facebook-n'ny lapan'ny tanàna. Ary satria maro ireo vaovao mivezivezy noho ny fitantaran'ny olona, tsy fantatray velively raha azo atokisana izany na tsia», hoy i Amanda nanazava.
« Nahita izahay, ohatra fa loharanom-baovao ahafantarana ny zava-misy ao amin'ny toerana iray ny tranonkalan'ny lapan'ny tanàna na ny pejin'ny ben'ny tanàna ao amin'ny tambajotra sosialy. Ary tsy asa fanaovan-gazety izany», hoy i Angela Pimenta, filohan'ny Projor nanamarika. «Ny zava-doza ho an'ireo tanàn-dehibe ireo dia tsy manaja ny fenitra momba ny fanaovan-gazety, tsy misokatra amin'ny fifanoherana, ary mety ho diso tanteraka, tsy feno, na nodisoina ireo vaovao omena, izay mitovy amin'ny fandisoam-baovao ihany».
DEZAKA AMIN'NY FAMPITAM-BAOVAO NA SAIKA
Olona iray tapitrisa mahery any amin'ny faritra metropolitanin'i São Paulo no mety tsy manana fampitam-baovao mahakasika ny tanànany. Tanàna 10 farafahakeliny no manana fitaovam-pifandraisana roa (vavahadin-tserasera, radio na fahitalavitra) izay mitantara ny fiainan'ny tanàna
Tanàna telo kosa tsy manana fampahalalam-baovao ao an-toerana: Vargem Grande Paulista (mponina 50.000), any atsimo andrefan'ny faritra, Pirapora do Bom Jesus (18.000) any andrefana ary Biritiba Mirim, mponina 31.000 ao amin'ny faritra Alto Tietê.
Ao amin'ny faritra Biritiba, atsinanan'i São Paulo, atahorana ny “dezaka fampitam-baovao”, na dia mbola tsy manan-danja aza izany. “Mahazo vaovao ampy avy amin'ny vondrona ao an-tanàna ao amin'ny WhatsApp izahay. Satria tsy manana gazety ny tanàna, dia mividy ny Diário de Mogi aho, “hoy i Maria Aparecida Nunes, 73 taona, monina ao Biritiba nandritra ny 30 taona farafahakeliny.
Any amin'ny manodidina ny tanàna, Ferraz de Vasconcelos, tanàna iray misy mponina 188 000, dia mitovitovy amin'izany toe-javatra izany ihany: gazety roa monja no ananany.
Ny safidy hafa manoloana ny tsy fahampian'ny fampitam-baovao araka izany dia ny tambajotra sosialy. “Zatra manaraka ireo kaontin'ny gazety any amin'ny faritra [napetraka amin'ny tanàna hafa] sy ny an'i Ferraz izahay, ary koa ny TV Cenário. Manaraka ny an'ireo mpanolotsaina ao amin'ny tanàna ihany koa aho, “hoy i Renan Santos, 20 taona mpianatra.
“Ny hany vaovao mba vakiako mikasika an'i Ferraz dia ao amin'ny Facebook. Matetika aho mijery vaovao ao amin'ny kaonty ‘Salve Ferraz “, hoy i Juan Pedro Morales, 26 taona sady mpanadihady ara-kajimirindra.
Ao anatin'ny olana ny tsy fitoviana, izay misy fiantraikany amin'ny fifandraisana ihany koa. Ahitana fampitam-baovao 1000 mahery ny faritra ao São Paulo. Na izany aza, miorina ao an-drenivohitra ny 76% amin'izy ireo. Ao amin'ireo tanàna sisa 38, 24% monja ny tahan'ny fampitam-baovao ao an-toerana. Ireo tanàna ireo kosa ahitana ny 40% -n'ny mponina.
Raha ampitahaina, dia manana fampitam-baovao fito ho an'ny mponina 100.000 i São Paulo. Any Franco da Rocha indray, fampitam-baovao iray ho an'ny mponina 100.000.
“Fantatry ny olona ny zava-mitranga noho ireo fanehoan-kevitry ny mpiserasera aterineto,” hoy i Márcia Pereira Cardoso, 40 taona monina any Franco. “Mampiasa Facebook na WhatsApp aho satria tsy manana fitaovam-pifandraisana hafa. Tsara ny manana gazety amin'ny radio na fahitalavitra miresaka momba ny tanàna, “hoy izy.
“Tsy mamaky gazety mihitsy aho satria matetika efa voaraiko avy amin'ny olona akaiky ahy ny vaovao hitako ao. Rehefa misy tranga iray mampalahelo matetika, dia miely haingana ny vaovao, “hoy i Gustavo Correa da Silva, mpahay herinaratra, 22 taona.
“Midika izany fa tsy manana zo hahazo vaovao ny olona,” hoy i Angela namintina. Izay mampiseho fa mikasa hanome topi-maso ny toe-draharaha ao amin'ny firenena ny fanadihadiana mba hisaintsainana vahaolana hanentanana famoronana tetikasa fanaovan-gazety ao an-toerana.
Manasongadina ny fifandraisana misy eo amin'ny tsy fahampian'ny fampahalalam-baovao sy ny kalitaon'ny tolotra ho an'ny vahoaka any amin'ny tanàna sasany ny fanadihadiana ary manondro ny fiverenam-bola amin'ny fanaovana izany.
“Hitantsika mazava tsara ny fifandraisana misy eo amin'ny fisian'ny gazety sy ny IDH (Indice de Développement Humain na Tondron'ny Fandrosoan'ny Mahaolombelona). Ny olona manana fahasahiranana indrindra amin'ny fahazoam-baovao dia ireo izay mijaly amin'ny tsy fisian'ny trano fidiovana, fanafody, fahazoana fampianarana tsara kalitao, ary koa ireo izay mijaly amin'ny faharavana ateraky ny loto.